State Pariyatti Sasana University
အထောက်အကူပြုသင်တန်း(ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ် စကားပြော)
(က) ကွန်ပျူတာသင်ကြားမှု။ ၂၃-၁-၂၀၀၈ မှစ၍ ပညာသင်နှစ်အလိုက် အဆင့်(၃)ဆင့်ခွဲ၍ နေ့စဉ် ည(၇)နာရီမှ (၈ : ၃၀)အထိ ပုံမှန် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။
(၁) Level.I အခြေခံစာစီစာရိုက်။ Page Maker, Power point, Microsoft Word စသည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်(၃)ပါးမှ သင်ကြားလျက် ရှိရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်မှု (၁၁)ကြိမ်တွင် သင်တန်းသားသံဃာ(၃၇၅)ပါးတက်ရောက် ခဲ့ပြီး လက်ရှိ(၁၂)ကြိမ်မြောက်၌ သင်တန်းသားသံဃာ(၄၄)ပါး တက်ရောက်လျက် ရှိပါသည်။
(၂) Level.II အခြေခံစာစီစာရိုက်။ Graphic Design, Photoshop စသည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်(၁)ပါးမှ သင်ကြားလျက်ရှိရာ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မှု (၈)ကြိမ်တွင် သင်တန်းသားသံဃာ(၂၀၃)ပါးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ (၉)ကြိမ်မြောက်တွင် သင်တန်းသားသံဃာ(၃၀)ပါး တက်ရောက်လျက် ရှိပါသည်။
(၃) Level.III အခြေခံစာစီစာရိုက်။ Hardware, Software, System စသည့် ဘာသာရပ်များကို ပြင်ပ လူပုဂ္ဂိုလ် ဆရာကြီးမှ သင်ကြားခဲ့ရာ ယနေ့ထိ သင်တန်းဖွင့်လှစ်မှု (၂)ကြိမ်သာရှိပြီး သင်တန်းသားသံဃာတော်(၃၅)ပါးတက်ရောက် ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Thagyar St, Kabaraye Pagoda Road, Yangon, Myanmar.
01 662 998
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပညာသင်ကြားမှု(ဗဟို) ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (၂၅)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ကျောင်းသား/သူ ၁၂ဝ ဦး တို့မှ နပသ(ရန်ကုန်)သို့ လေ့လာရေး ခရီး
Copyright © 2022 State Pariyatti Sasana University. All Rights Reserved